musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » COVID Vaccinations yeVana Nekukurumidza Iti ER Vanachiremba
Sezvo mishonga yekudzivirira yeCCIDID-19 yava kuwanikwa kuvana vane makore mashanu kusvika gumi nerimwe, American College of Emergency Physicians (ACEP) inokurudzira vachengeti nemhuri kuti vabaye nhomba uye vatore matanho anodiwa kuchengetedza vana munguva yezororo nefuruu iri kuuya.
"Varapi vekukurumidzira kutenderera nyika vanoramba vachiona kuti hutachiona hweCCIDID-19 hunogona kuita sei muvarwere veese mazera, kunyanya kune avo vasina kubaiwa," akadaro Gillian Schmitz, MD, FACEP, mutungamiri weACEP. “Tinotenda kuti mishonga yekudzivirira haina njodzi, inoshanda uye yave kuwanikwa. Kubaya vana vako ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuchengetedza mhuri yako uye kutibatsira kukunda hutachiona. ”
Vana havawanzo kurwara zvakanyanya kubva kuCOVID-19 pane vakuru, asi njodzi kubva kuCOVID ichiri yakakosha. Vana vangangosvika mamirioni 1.9 vane makore mashanu kusvika gumi nerimwe vakawanikwa vaine COVID-5, sekureva kweCenters for Disease Control and Prevention (CDC). Pave paine vangangosvika zviuru zvisere nemazana matatu vakaiswa muchipatara nechetatu vanoda kutarisirwa zvakanyanya uye vanosvika makumi mapfumbamwe nevaviri vafa muboka rezera iroro. CDC inokurudzira kuti munhu wese ane makore mashanu zvichikwira awane mushonga weCOVID-11.
Vanachiremba vekukurumidzira vanoda kuvimbisa vachengeti kuti majekiseni aripo akachengeteka uye anoshanda. Kugadzirwa kwejekiseni hakuna kumhanyiswa, uye zvigadzirwa izvi zvinotevera nzira yakasimba yekusangana neFood and Drug Administration (FDA) matanho ekuchengetedza. Kufanana nejekiseni revakuru, vanhu vashoma vanosangana nemhedzisiro. Migumisiro yainyanyozivikanwa yakanyorwa panguva yekuchengetedzwa kwakawanda yaive yakapfava uye ichigoneka kumba, kusanganisira ruoko rwunorwadza, kutsvuka pedyo nenzvimbo yejekiseni, kana kuneta.
Wese munhu anogona kutora matanho ekudzivirira mumwe nemumwe nekubayiwa nhomba uye nekutevera gwara remunharaunda, kushamwaridzana, uye kuvhara kumeso kwavo. CDC inokurudzira kuti vachengeti vatarise kushamwaridzana kwemwana nevamwe uye kutora matanho ekudzivirira mwana kana chero munhu mumba akarwara kana aine zviratidzo zveCOVID-19. Izvozvo zvinogona kusanganisira kuchengeta mwana pamba uye kutsvaka kutarisirwa kwakakodzera kana mwana akarwara. Vese vana nevakuru vanogona kuparadzira hutachiona kunyangwe vasina asymptomatic.
Kuti uwedzere dziviriro panguva inogona kunge iri mwaka wefuruwenza ine ngozi, vanachiremba vekukurumidzira vanokurudzira vachengeti nevana kuti vabaye nhomba kubva kuCOVID-19 nefuruwenza. Zvakachengeteka kupfurwa nefuruwenza uye yekudzivirira yeCOVID panguva imwe chete, uye haina kunonoka kupfurwa nefuru munguva yekutanga kwechando uye mwaka wezororo wakabatikana.
Sezvo vachengeti vachitarisa vana zviratidzo zveCCIDID-19, senge fivha yakanyanya, kurwadziwa nehuro, kukosora, kurwadza kwedumbu, kana musoro, zvakakosha kuti uzive nguva yekuenda kudhipatimendi rekukurumidzira, kungave kuri kweCCIDID-19 kana chero imwe. chirwere kana kukuvara.
“Pane zviratidzo zvenjodzi isingambofaniri kufuratirwa,” akadaro Dr. Schmitz. "Varapi vekukurumidzira vakadzidziswa kubata marudzi ese ezvinotyisa zvehutano, uye munhu wese anogona kuve nechokwadi chekuti dhipatimendi rekukurumidzira ndiyo nzvimbo yakachengeteka kuva, kune varwere vezera ripi neripi, pavanenge vachirwara."